कीर्तिमानी मूल्यमा बिक्यो आईपीएलको मिडिया राइट्स, कसले मार्यो बाजी ? | आर्थिक अभियान
कीर्तिमानी मूल्यमा बिक्यो आईपीएलको मिडिया राइट्स, कसले मार्यो बाजी ?
नयाँ दिल्ली (भारत) । विश्वको सबैभन्दा धनी क्रिकेट प्रतिस्पर्धा इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को प्रशारण अधिकार ६ अर्ब डलर भन्दा बढीमा विक्री भएको छ । आगामी ५ वर्षको लागि आईपीएलको प्रशारण अधिकार भारतीय अर्बपति व्यापारी मुकेश अम्बाीन समर्थित कम्पनी भायकम १८ र डिज्नीको स्वामित्वमा रहेको स्टार इन्डियाले हात पारेका छन् ।
आईपीएलको पाँच संस्करणको डिजिटल प्रसारण अधिकार पाउन भायकमले ३ अर्ब ०२ करोड डलर तिरेको छ । कम्पनीसँग सन् २०२३ देखि सन् २०२७ सम्म प्रतियोगिताको स्ट्रिमिङ अधिकार रहनेछ । डिज्नीले भने प्रतियोगिताको टिभी प्रसारणका लागि ३ अर्ब ५ करोड डलर तिरेको छ । स्टारको करार पनि आगामी पाँच वर्षसम्मको छ ।
यस पटक प्रशारण अधिकारको लागि तिरिएको यो रकम अघिल्लो पटकको भन्दा दोब्बर भन्दा धेरै हो । यस अघिका पाँच संस्करणको आईपीएलका लागि स्टार इन्डियाले २ अर्ब ४० करोड डलर तिरेको थियो । योसँगै आईपीएल अमेरिकाको नेशनल फुटबल लीग (एनएफएल) र बेलायतको इङ्गलिश प्रिमियर लिग (ईपीएल)सँगै विश्वको महँगो स्पोर्ट्स लिगमा परेको छ ।
पाँच वर्षमा आईपीएलका कूल ४१० ओटा खेलको प्रसारण हुनेछ । एउटा प्रतिस्पर्धाको टिभी प्रशारण अधिकार ७३ लाख ६० करोड डलरमा बेचिएको छ । डिजिटल स्ट्रिमिङ अधिकार भने प्रति खेल ६४ लाख डलरमा विक्री भएको छ । आईपीएलको एक प्रतियोगिताको प्रसारण अधिकारको लागि तिरिएको यो रकम ईपीएलको भन्दा धेरै हो ।
योसँगै ईपीएल म्याच भ्यालुका आधारमा एनएफएल पछि दोस्रो महँगो खेल बनेको छ । ईएपीएल भने म्याच भ्यालुका आधारमा तेस्रो महँगो प्रतियोगिता हो । बीआईसीसीले प्याकेजमा मिडिया राइट्सको लागि आइतबार बोलकबोल शुरु गरेको थियो । अन्य दुई अधिकार चाँहि नन–एक्सक्लुसिव स्पेशन क्याटागोरी र भारत बाहिर अन्य देशमा प्रशारण अधिकार थियो । बोलकबोल मंगलबार सम्पन्न भएको हो । लिलामीमा सात ओटा कम्पनी सामेल भएका थिए । एजेन्सी